Indlela yokwenza i-dynamite e "Maynkraft", noma Ukufunda ukwakha izikhali
Namuhla sizoxoxa nawe mayelana nendlela ukwenza dynamite e "Maynkraft". Lena into ethakazelisa kakhulu, okuyinto nakanjani singaba usizo kabi uma ekwakheni izingibe. Ngakho aholele ukumazi kancane kangcono.
Kodwa ngaphambi kokuthi wenze dynamite "Maynkraft", ake sibone ukuthi kungcono konke ndaba futhi kungani isetshenziswa umdlalo. Ngokuqinisekile wonke umuntu uyazi ukuthi empilweni yangempela le into kungenziwa ngokuthi ibhomu. Usebenzela qhumisa okuthile. Ngakho-ke kuyinto lapha. Dynamite "Maynkraft" - uhlobo detonator ukuthi zingafakwa ku izinqola zokudla nezinye izindawo. Kodwa ingabe ukwenza kanjani? Ake sizame ukuqonda lokhu.
Uma ecabanga indlela yokwenza i-dynamite e "Maynkraft," khona-ke, kusobala, kufanele uzilungiselele lokho kuyodingeka uthole izimali eziningi. Ezinye zazo yilezi Kulula kakhulu ukuthola, futhi abanye - cishe akunakwenzeka. Ngakho esikudingayo ukuze Crafting ye-dynamite? Insiza wokuqala - kungcono isihlabathi.
Sand amabhlogo, mhlawumbe, okuvame kakhulu zomhlaba game. Nokho, ukuze kwakhiwe bengakwenzi ngempela kufanelekile. Ingabe kuphela zokuhlobisa. Kodwa njengengxenye Crafting sisetshenziselwa izinto ezinkulu.
Ngingalutholaphi ke? Mhlawumbe uma ubuchopho kancane poraskinut, singaqonda ukuthi le nsiza abakhona acishe yonke indawo. Kodwa obuningi ke uvame eyatholakala emihumeni, amabhishi, yebo, ezijulile ngaphansi kwamanzi. Beka phansi echibini noma olwandle - lapho uzothola amabhlogo kunesidingo. Nokho, lokhu akukhona ukuphela kwesixazululo, "umongo" impahla. Indlela yokwenza i-dynamite e "Maynkraft" ngaphandle esihlabathini evamile? Ake sibone, yini esikhundleni salo.
Uma ufuna kancane kwanyakaza futhi udale isihloko sethu samanje ngaphandle evamile, atholakale yonke isihlabathi ke, yebo, ungazama ukuthola okuthiwa isihlabathi esibomvu. Kuyinto umthombo ukuthi ubuyisela "izinto eziyisisekelo," yethu. Nokho, lokhu kungaba nzima kakhulu.
Iqiniso ukuthi isihlabathi obomvu, nakuba afana ezivamile, kodwa kuveza lula. Ungayithola kuphela mesas. Iphinde isetshenziselwe ukwakha epulazini Cacti nomhlanga. Ngokuvamile, ungase ukhethe ukuthi yiliphi isisetshenziswa ukukhiqiza. akusiyo kubalulekile kuncike yethu. Sathola ngangokunokwenzeka ngale nsiza? Khona-ke ungakwazi dlulelani esinyathelweni esilandelayo.
Manje kufanele uthole futhi usebenzise enye ezinsiza ekubumbeni. Yiqiniso, lena into enjalo neziqhumane. Uma ecabanga indlela yokwenza i-dynamite e "Maynkraft," khona-ke, kusobala, kufanele uqiniseke ukuthi babeshiye izinto. Ngaphandle kwayo, ukudalwa kuncike kwethu kwamanje olungeke lwenzeke.
Ngingalutholaphi? Lapha siba "izithukuthuku" kancane. Inkinga yabo bonke wukuthi powder kungenziwa elalitholakala engcebweni. Kodwa hhayi kuphela lapho. Futhi, kungenziwa embossed. Ngokwesibonelo, kripperov noma abathakathi. Uma ungakabi uyilungele impi-ke, kusobala, kungcono uyeke zokulwa poryskat kancane ku zengcebo. Mhlawumbe kukhona uzothola impahla ngokwanele. Ukuze into yethu liyadingeka amayunithi 5 yalesi material. Kwaqoqwa? Khona-ke bheka ukuthi kungakanani isihlabathi. 4 Ingabe ikhona block esihlabathini? Khona-ke okukhulu! Ungakwazi sihlanganise nabo. Bheka lokho owakwenza. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwenza i-dynamite e "Maynkraft".
Nokho, lokhu ngeke siyeke. Uma une iloli, ungakwazi kalula futhi umane ukudala iziqhumane real-gibe. Hlanganisa ngayo ibhomu yakho - Truck isilungele ukusetshenziswa. It uhlala ukuze wasibeka phezu komzila. Ngeshwa, yilokho okuhlukile ekupheleni alufakwa. Uma usetha "Maynkraft" izindlela ku dynamite, khona-ke kuyomelwe ithuba elikhulu sokwenezela ezinkathazweni inhlanganisela kunokwenzeka lomunye 48 izinhlobo amabhomu. Nakuba umdlalo ukhululekile, ngokuvamile suffice nezindlela yokukhiqiza ejwayelekile.
Yekuchumana mayelana nendlela ukuvala utshani "Rast"
Lisho ukuthini igama elithi "okopelayo"? Ngubani okopelayo e "Varfeyse"?
Ingulube izimbambo e multivarka namazambane futhi amakhambi elimnandi
Hunting carbine "Los": Izici kanye nokubuyekeza
Uhlobo lwezinja ze-alabai: uhlobo kanye nezici zemfundo
Funny yesehlakalo ngo-Ephreli 1st. Isimo 1 Apreli
Galina Goncharova: Incwadi
Aluminium embundwini: izinhlobo kanye injongo
Ubuso bekhompyutha Companion emaqaqasini yokuhlala
NoZamcolo Krasnodar. Usongo lwezigebengu izikhukhula e Krasnodar
Indlela ukuhlanza umata ekhaya